AbeKhomishini Yokhetho bahlaba ikhwelo lokungenela ukhetho loHulumeni Bendawo - Bayede News
Isithombe: nguDeaan Vivier
Umdlandla Wokufunda KwaboHlanga
USihlalo we-Independent Electoral Commission (IEC) uGlen Mashinini unxuse wonke amaqembu ezepolitiki angenele ukhetho loHulumeni Bendawo ukuthi avumele omunye nomunye ukuba akhankase ngokukhululeka.
UMashinini ubekhuluma namaqembu ezepolitiki ahlukene eNkosi Albert Luthuli International Convention Centre, eThekwini emcimbini lapho amaqembu asayine khona indlela yokuziphatha. Ngalokhu kuhloswe ukukhuthaza ukubekezelelana kwamaqembu ezepolitiki. Angama-323 amaqembu ezombusazwe angenele ukhetho kuzwelonke.
Okhethweni loHulumeni Bendawo lwangowezi-2016, kwakukhona amaqembu ezepolitiki angama-200 kuphela ayengenele ukhetho nabangu-61 000 ababengenele ukhetho. KwaZulu-Natal amaqembu angama-78 abeke abazongenela ukhetho. Ma-5 kuphela amaqembu ezepolitiki angenele ukhetho kubo bonke omasipala KwaZulu-Natal. I-IEC ithi iTheku linesibalo esiphezulu sabantu abazimele abazongenela ukhetho.
UMashinini uxwayise amaqembu ezepolitiki ukuthi angasebenzisi ulimi oluzodala udlame.
“Ngicabanga ukuthi okusemqoka ukuthi umthethosisekelo wethu ucabanga ukuthi ezweni lethu abantu kumele bakhululeke ukuveza imibono yabo futhi babambe iqhaza okhethweni ngaphandle kokwesaba ngaphandle kokuphoqwa. Futhi okhethweni, imiphumela ezobanjwa ibe mahhala futhi engenzeleli. Ngakho-ke, sidinga bonke labo abaphikisanayo ukuthi kufanele basayine isibambiso kepha noma ungasisayini, ngoba kuyingxenye yesenzo sokhetho osuvele uboshiwe yiso, ngeqiniso lokuhambisa abazongenela ukhetho.”
UMashinini uzwakalise ukukhathazeka ngokusatshiswa kwabasebenzi be-IEC. Unxuse amaqembu ezepolitiki ukuthi asebenzise imigudu efanele ukufaka izikhalo.
“Sibonile kwezinye izimo ukuthi kukhona labo abakhetha ukusabisa, ukuphoqa noma ngisho nokusabisa noma nokuhlukumeza abasebenzi bethu, ikakhulukazi ezindaweni zokuvota. Sinxusa wonke umuntu ukuthi thina, njengekhomishini, kunemithetho nemithetho ecace bha ekhombisa uma kukhona ukungagculiseki ngokusebenza kwabasebenzi bethu, kufanele silandele lezo zinqubo akukho sidingo sokuhlukumeza nokusabisa noma ngubani oshiya izwe lethu ngesikhathi sokhetho.”
UMphathi Wezokusebenza we-IEC KwaZulu-Natal, uNtombifuthi Masinga, wathi sinyukile isibalo sabazongenela ukhetho namaqembu ezepolitiki.
“Sinamaqembu ezepolitiki angama-78 angenela amaqembu ahlukene ezindaweni ezahlukene kulesi sifundazwe. Kepha akubona bonke abaphikisana neKZN yonke. Lesi yisilayidi sokuncintisana esibheka ukhetho lwangowezi-2011, 2016, nangowezi-2021. Uzobona ukuthi likhule kangakanani inani lamaqembu ezepolitiki abencintisana kulesi sifundazwe.
Njengamanje sihleli ema-78 futhi siqhamuka emaqenjini ezepolitiki angama-28 ngowezi-2011. Abazongenela ukhetho lwamawadi bavela ngaphezu nje kwezi-5 600 ngowezi-2011, baba ngama-6400 ngowezi-2016. Kulo nyaka, siqophe abantu abangu-14 092 abangenele izihlalo ezingama-900 esinazo,” kuphetha lesikhulu.
Basayina lesi sifungo, amaqembu ezepolitiki azibophezele ekuqinisekiseni ukubekezelelana kwezepolitiki esifundazweni.
USihlalo we-ANC uSihle Zikalala noBlessed Gwala we-IFP bathi abaholi bezepolitiki kumele bashumayele ukubekezelelana kumalungu abo. I-African Transformation Movement (ATM) enye yamaqembu ezepolitiki amaningi asungulwe ngaphambi kokhetho lukazwelonke lwangowezi-2019 nayo izibophezele ukuthi izoyithobela le mithetho. Ilungu leKomidi eliPhethe lesiFundazwe uSipho Mbalo uthi bazosebenzisana namanye amaqembu ezepolitiki ukuqinisekisa ukuthi ukhetho lukhululekile futhi alunankinga.
“Njenge-ATM, siyizisebenzi zokuthula futhi siyakuqonda ukuthi kumele sisebenzisane nawo wonke umuntu. Siyaqonda ukuthi bonke abavoti banakho ukuzikhethela futhi siyathembisa ukuthi sizogcina konke, yonke imithetho esiyibekelwe ngokuthembeka.”
I-IEC ithi imiphumela yokhetho izomenyezelwa ngokusemthethweni mhla ziyisi-9 kuLwezi. Amakhansela nezimeya njengamanje bazohlala ezikhundleni zabo kuze kube ngumhla ziyisi-8 kuLwezi.